" မိုးရွာထဲမှာလမ်းလျှောက်ချင်တယ် "
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်ထဲ
ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းတွေ ညွှတ်ကျ ……
ပြုံးတာလား မဲ့တာလား ဘယ်သူသိနိုင်မလဲကွယ်။
ကိုယ့်ကို အမြဲ နောက်ကောက်ကျစေခဲ့။
ကိုယ့်မျက်ဝန်းမှာ ပုလဲတွေခ …..
ပျော်လို့လား ၀မ်းနည်းလို့လား ဘယ်သူသိနိုင်မလဲကွယ်။
တကယ်ကို ကိုယ့်ဇာတာက အဲ့လိုပဲ
ကိုယ့်သေချာမှုတွေကပဲ ကိုယ့်ကို အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သတ်
တကယ်ကို ခဏခဏ သေခဲ့ဖူးတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ် ….. မသေပါရစေနဲ့။
Posted by ကြယ်ပြာ at 1:46 AM0comments Links to this post
Labels: ကဗျာ, ခံစားချက်အပိုင်းအစများ
" ယုံ ....... "
ဆံပင်ရှည်ရှည် နဲ့ ပါးချိုင့်လေးပေါ်အောင် ပြုံးတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီကဗျာကို ရေးထားတယ်။
မင်းဆံနွယ်တွေက လေထဲ တ၀ဲဝဲလွင့် …
ကျရှုံးချင် ရှုံးပါစေတော့ရယ်လို့ ရဲရဲရင့်ရင့် သီကျူး …..
ဖြက်ကနဲ မိလိုက်တဲ့ အကြည့်တစ်ချက်နဲ့တင်
ထာဝရ ငြိတွယ်ခွင့်ပေးသနားစေဖို့ အကြောင်း ဆုတောင်းမိ ……
မင်းဆီ တွား လျား တိုး ကပ် ချော့ မြူ ….
မည်ကာမတ္တအလွမ်းလို့တော့ နာမည်မတပ်နဲ့ကွယ် ………
မင်းကို တစိမ့်စိမ့်လွမ်းတယ် …. ယုံ ……
ရေးသူ - ကြယ်ပြာ
ရေးချိန် - စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက် ညနေ ၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 11:34 PM5comments Links to this post
" အိမ်လွမ်းနာ "
ဒီတစ်ချက်နဲ့တင် စိတ်ဓါတ်တွေ အားပြည့်
ဘယ်သူက ရိုက်ပြီး အတင်းဝေးခိုင်းနေလဲလို့
ကိုယ့်အတွက် ရေမကြည်၊ မြက်မနုတော့တဲ့အခါ
သေချင်လို့ တောပြောင်းသွားတဲ့ ကျားတွေလဲရှိရဲ့။
ခြောက်ကပ်ကပ် ထမင်းဝိုင်းနဲ့ အေးစက်စက်မွေ့ရာ၊
သေသွားတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ခဲသွားတဲ့ မေတ္တာတရားတွေ
အိမ်ပြန်ချိန်အတွက် အချိန်တွေဘယ်လောက်လိုမလဲ ရေတွက်ရင်း
တစ်နေ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ ………..
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:36 PM4comments Links to this post
Labels: Tag, ကဗျာ
* ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး - Template: Blogger Sablonlari (Images)
ခံစားချက်တွေက ကဗျာတွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။
စိတ်ထဲက ခံစားချက်တွေကို တတ်သလောက်လေး ကျိုးစား သွန်ချထားတာပါ။ ဒိုင်ယာရီဆိုလဲဟုတ်တဲ့ ဒီဆိုဒ်လေးကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လာဖတ်တဲ့သူတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပြုံး၊ ရယ်၊ ဟား (5)
မီးတောက်နေတယ် ... - ည ၉ နာရီခွဲ ဘွိုင်လာခန်းနားဖြတ်ရင်း မီးတွေ့ လိုက်လို့ဘွိုင်လာအိုးအောက်ကို ငုံ့ ကြည့်လိုက်တော့ မီးတောက်မီးလျှံတွေ တွေ့ တယ်။ ဘုရားရေ မီးလောင်နေတာလာ...
သင်းကွဲခရေ - " ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အတွက် အမှတ်တရရေးပေးတဲ့ ဘလော့ဂါ " ဆိုတဲ့ ဆူးသစ်ရဲ့တဂ်ပို့စ် ဘလော့ဂ်တစ်ခေတ်ဟာ ကျွန်မရင်ထဲမှာ အမြဲကိန်းအောင်းနေလျက်ပါ။ သတိရတိုင်း ဘလော့ဂ်ရွာထ...
တိုးတက်လာသည့် ခေတ်စနစ်ကြားမှာ သတိပြုရမည့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး - *တိုးတက်လာသည့် ခေတ်စနစ်ကြားမှာ သတိပြုရမည့် ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေး* ငွေကြေးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာနည်းပညာ (Financial Technology) များသည် ခေတ်နှင့်အညီ တိုးတက် ပြောင်းလဲလ...
မနက်ဖြန် - မနက်ဖြန်တဲ့လား ဘာတွေဖြစ်မယ်မှန်း ကြိုတင်မသိနိုင်ဘူး မျှော်လင့်ချက်တွေရယူနိုင်မလား မမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေလက်ခံရမလား စီစဉ်ထားတာတွေအကောင်ထည်ဖော်နိုင်မလား စိတ်အ...
သတိရ - အမျိုးအဆွေတော်တွေ အားလုံးကို သတိရ လွမ်းဆွတ် တမ်းတမိပါသည် အပျော်တွေ စုနေကြတဲ့ အချိန်လေးတွေ အောက့်မေ့သတိရလျှက် ငမူးလေး အိုက်ခီလောက်
အဆုံးသတ် - လမ်းခွဲခြင်းဆိုတာ ဝမ်းနည်းဖို့ မဟုတ်သော်လည်း မျက်ရည်ဥလေးတွေ တွဲခိုခဲ့တယ်။ - သံယောဇဉ်ဆိုတာလည်းက ဖြစ်တည်ဖို့ ခဲယဉ်းသလို ဖြတ်ဖို့လည်း ခက်ခဲပါတယ်။ - လောကကြီးမှာ...
မန္တလေး - ဇာတိချက်မြုပ် မွေးရပ်မြေ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ ဂုဏ်သရေ ကြီးမားရာ အရပ် မြန်မာမှုရဲ့ နောက်ဆုံး ခံတပ်မြို့ လွင်ပြင်ဆန်သော ရာသီပူပြင်းမှုက မိတ်ရင်းဆွေရင်း ရောင်းရင်...
Amazing Website Proposal for redesign - Hi There, Blessings foraBeautiful Day. I am Maya. I'm an online marketing executive. I found your web contact email by Google Search. I would like to d...
- အင်း ကိုယ့်အလင်းတန်းရွာလေးလည်း ရေကြီးတဲ့အထဲ ပါသွားလိုက်တာ လူသူအရောက်အပေါက်တောင် မရှိတော့ပါကလား သူကြီးလည်း ရွာပြန်မလာနိုင်တော့ အထီးကျန်လှချည့် ဆရာလေးမောင်သေ...
အိ ပ် မ က် ရှ င်
ကျွန်တော်နားလည်မိတဲ့ သံယောဇဉ်အကြောင်း....... - မွေးကတည်းက နို့မှုန့်နဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်အဖို့ ဒီဘဝမှာ မေတ္တာငတ်ဖို့ ကံပါလာတယ် ဆိုရမလိုပါပဲ ။ ညီအကိုသုံးယောက် ရှိပေမယ့် အမြဲတမ်း အကိုအကြီးဆ...
ဒီလိုလျှောက်မယ် ဖိနပ်ကလေးရေ - " ဒီလိုလျှောက်မယ် ဖိနပ်ကလေးရေ " တစ်ယောက်ရင်ကို တစ်ယောက် ခြေရာခြင်းထပ်အောင် ချစ်ခဲ့ကြမှတော့ ကိုယ်တို့ဟာ ဆုပ်လည်း မစူးဘူး စားလည်း မရူးတော့ဘူး ခိုင် အဆင်ပြေတ...
Positive Thinking - ကိုယ်ဟာ ဘယ်သူ တစ်ဦး တစ်ယောက် ပေါ် မဆို Positive thinking နဲ့ တွေးမိသူ တစ်ယောက် မည်သူ့ အပေါ် ကိုမှ အဆိုးမြင်တဲ့ negative thinking နဲ့ မတွေးခဲ့ဘူ...
မသိမသိ - #တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ဟောဒီကောင်းကင်ပြာကြီရဲ့ အောက်မှာ တစ်ယောက်ထဲငါ့ တွေဝေငေမော ပင့်သက်ရှို့က်ရူ ပူလောင်မူတွေနဲ့ မျော်လင့်ခြင်းဆိုတာဘယ်ဝယ်မသိ မရေရာတဲ့ အတိတ်ရဲ့ အိ...
နှစ်ကိုယ်တူအလွမ်း - ကြယ်စဉ်ခါးတွေလင်းလက် အရိပ်မဲ့တဲ့ညမှာ ပါးလျှတဲ့လတစ်စင်းရဲ့အပြုံးကိုငေး အဝေးဆုံးကနင့်ဆီ အလွမ်းတွေတေးသီရင်း ညည့်ငှက်ကို မိတ်ဖွဲ့ လေညှင်းကိုလက်ဆက်လို့ မပျက်ကွက...
အာရုဏ်ဦးမှာ ထွန်းသည့် စန္ဒာ - ညဦး ညလယ် ညသန်းခေါင်၌ မှောင်မိုက်ပါဘိ အမေမရှိ သားမီးရင်ဝယ် မှောင်ရယ်ကြီးစိုး အိုး............ ကြောက်.. ကြောက်လိုက်တာ အမှောင်ရယ်ဆုံး အာရုဏ်တက်တော့ အိုဘယ့်.....
I want to go HOME - I want to go home. သနားစရာ။ baby လေး။ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေပြန်တော့ သူလည်းပဲပြန်ချင်မှာပေါ့။ ခက်တာက ကိုယ်က ရုံးဆင်းမှပဲ သွားကြိုနိုင်တာ။ သူ့ အဘွားကလည်း ရန်ကုန်ြ...
နံနက်မပါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မနက်ခင်း - ကျနော့နာမည်“မူးတူး”မဟုတ်ပါဘူး ၊ ကျနော်ကုလားလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်.. ခုလောလောဆည်တော့ ကျနော်အိပ်ချင်မူးတူးဖြစ်နေပါတယ်။ ဗမာစကားကလည်းခက်ပါတယ် ၊ အိပ်ငိုက်တာတောင...
အိမ်ရှင်မ ၂ - မနက်က အိပ်ရာနိုးတော့ မနက် ၆ နာ၇ီ . ရုံးပိတ်ရက်ကို မျက်လုံးက အလိုက်မသိစွာ ဆက်အိပ်လို့ မရ . ဟိုလှိမ့် ဒီလှိမ့် ပြန်အိပ်ဖို့ ဘယ်လိုပင် ကြိုးစားသော်လည်း မရတော့...
ဒီနေရာ - (ပုံကို www.google.com မှ ရရှိသည်) နွေးထွေးခြင်းနှင့် လက်တစ်စုံ ကမ်းခဲ့ဖူးသလို လက်ပြနှုတ်ဆက် ကျန်ခဲ့တာလည်း ဒီနေရာ။ ပျားရည်ဆမ်းတဲ့ ရယ်သံချိုချို ဟစ်ကြွေ...
လွယ်ကူခြင်း Vs ခက်ခဲခြင်း - လူတစ်ယောက်ရဲ. Address book မှာ နေရာ တနေရာစာရဖို. လွယ်ကူပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ. နှလုံးသား မှာ နေရာတနေရာ ရဖို. ခက်ခဲပါတယ်။ သူများ အမှား၊အပြစ် ကို ရှာ ဖို. အင်မတန...
Myoe Htet Zaw 's Official Site
ကို တိုးလေး
My Native Town
အားလုံးကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်
ကာရန်မဲ့ ရင်ခွင်၏ ရင်ကြွင်းဒဏ်